Trondro matavy, ranon’ampongabendanitra, …miady amin’ny mikraoba
Smoothie frezy +voazavo + solila… manafisaka kibo
Tsy voatery hanao ezaka be mety ho fisaka ny kibo. Ity zava-pisotro manaraka ity izao dia hanampy anao hanafisaka kibo raha sotroina isan’andro. Mahasolo sakafo rahateo izy satria mahavoky avy hatrany
Marary tenda : Rehefa inona no manatona dokotera ?
Tranga mety hiseho foana ny aretin-tenda. Viriosy foana, amin’ny ankapobeny no mahatonga azy io.
Ody gripa amin’ny tongolo gasy sy vinaingitra
Azo atao ny manamboatra ity karazana sirop ody gripa ity ao an-trano ka akora natoraly avokoa no mandrafitra azy. Tsy avy hatrany dia azo ampiasaina anefa izy fa mila 2 herinandro eo vao tena vonona.
Ranom-boankazo mampahita tory vetivety
Miasa saina loatra, dila ny ora tokony natoriana, zatra matory alim-be, tsy milamina tsara ny fandevonan-kanina…
Tokony hanatona « gynécologue » na tsy marary aza!
Ny « gynécologue » no atonina rehefa misy olana manokana mitranga eo amin’ny fahasalaman’ny vehivavy.
Bolety ovy sy nofon-trondro : Be otrikaina ho an’ny zaza
Isan’ny fototra iray hiadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo mpahazo ny ankizy ny fanomezana azy sakafo feno otrikaina.
Diabeta : Tokony tiliana indray mandeha isan-taona
Toe-batana mety hahazo ny olona rehetra ny diabetika, saingy ahiana kokoa ireo avy amina’ny fianakaviana efa nahitana trangana diabeta. Indro ny tohin’ny fandaharana TAIZA VATANA tao amin’ny Top Radio, momba ny torohevitry ny mpitsabo.
Rehefa marefo ny hery fiarovana ao anatin’ny olombelona dia mora andairan’aretina kely. Azo atao tsara anefa ny mamorona sy manamafy ny sela fotsy, na ny hery fiarovana, rehefa fantatra ireo sakafo miteraka izany sy ny fatra tokony hanina aminy isan’andro.
Tantely: Miady amin’ny aretin’ny taovam-pisefoana, manasitrana ratra ary miady amin’ny bakteria ny tantely. Feno vitamina, “polyphenol” ary “oligo-élement”izy, izay mitondra ireo voka-tsoa ireo. Azo atao dite, na ampiarahana amin’ny fromage blanc, na koa afangaro amin’ny vary sy ronono efa akaiky ho masaka, ny tantely. Ho an’ireo olona marary kosa dia tsara raha mihinana iray sotro lehibe, isaky ny hariva, ampiarahina amin’ny dite , na atao tambavy miaraka amin’ny dità sy voasarimakirana, mba hampitoniana haingana ilay aretina.
Manala mikraoba, miady amin’ny fanaintainana sy miady amin’ny homamiadana ny “antioxydant” ao anatin’ny ranon’ampongabendanitra. Totoina atao “jus” no tena mety indrindra hahazoana ny voka-tsoa rehetra entin’ny voany. Tsy ampiana siramamy fa rano kely manampy amin’ny fitotoana azy amin’ny “mixeur” fotsiny. Iray vera isa-maraina no ilaina sotroina.
Mahenika ny vitamina C ilain’ny vatana ao anatin’ny andro iray ny kiwi iray, ka azo antoka fa mampatanjaka be ny hery fiarovana, manampy ny vatana ho mora handray ny fer ihany koa ary misoroka ny harerahan’ny vatana. Manamora ny fahasitranan’ny fery ary miaro ny sela tsy ho mora antitra ihany koa. Hanina manta izy no tsara, mba tsy hahafaty ny vitamina C ao anatiny. Azo atao “smoothie”, na salady, na hanina amin’ny sotrokely fotsiny amin’izao izy. 1 na 2 isan’andro amin’ity voankazo ity no hanina isan’andro.